Madaxweyne Xaaf muxuu ka yiri Guddiga Farsamadda Galmudug | Somsoon
Home WARAR Madaxweyne Xaaf muxuu ka yiri Guddiga Farsamadda Galmudug
Madaxweyne Xaaf muxuu ka yiri Guddiga Farsamadda Galmudug
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa war kasoo saaray Guudiga Farsamadda Maamulka Galmudug ee ay magacawday Wasaaradda Arrimaha Gudaha xukuumadda Soomaaliya waxaa uu shegay in uu ka qayb qaatay “dhismaha guddiga farsamadda maamul u dhisadda Galmudug”.
Xaaf ayaa guddiga kula dardaarmay in ay shaqadooda u gutaan si ay ku dheehantahay hufnaan islamarkaana ay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara shaki . sidoo kale dadka reer Galmudug ayuu ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha maamulka.
“Waxaan halkaan ka cadeynayaa in aan ka qayb qaadanay dhismaha guddiga maamul u dhisidda Galmudug” ayuu Axmed Ducaale ku sheegay war uu soo saaray.
“Waxaan Wasaaradda Arrimaha Gudaha kala sii shaqayn doonaa dhismaha Galmudug mideysan” ayuu Madaxweyne Xaaf ku balanqaaday qoraalkiisa.
Madaxwenaha Galmudug ayaa Warqad uu soo saaray 30-kii September waxaa uu ku sheegay in uu Wasaradda arrimaha Gudaha kala laabtay u wakiilashadii dhismaha Galmudug wuxuuna Golihiisa Wasiiradda ugu baaqay in ay kulan isugu yimaadaan 10-10-2019, oo ku began Khamiista berri ah.
Article horeGuddiga Farsamadda Galmudug oo lasoo saaray
Article socoda Askar ka tirsan Booliiska Soomaaliya oo qarax lagu dilay